सुत्केरी महिला वास्तविक उमेरभन्दा किन बढी देखिन्छन् ? : RajdhaniDaily.com
Home विदेश सुत्केरी महिला वास्तविक उमेरभन्दा किन बढी देखिन्छन् ?
क्यालिफोर्निया । बच्चा जन्मिएको सुरुवाती ६ महिनामा सुत्केरी महिला आफ्नो वास्तविक उमेरभन्दा तीनदेखि सात वर्षसम्म जेठी देखिने एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको एक अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष यो छ कि नवजात शिशुको हेरविचार गर्दा र उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दा यस्तो देखिएको हो ।
यो शोधको अध्ययन गर्ने दलमा डा. जुडिथ क्यारोल पनि थिइन् । उनले भनेकी छन्, ‘बच्चा जन्मेपछि आमाको स्वतन्त्र जीवन नै हुँदैन, उनीहरूको हेरविचारमै आमाको समय बित्छ, जस्तै ः आधा रातमा बच्चालाई दूध खुवाउनु, उनीहरूको डायपर फेर्नु आदि । हेरविचारमा पर्याप्त समय दिनुपर्ने भएकाले आमाको निद्रा पनि पूरा हुन पाउँदैन । जसले गर्दा आमाको वास्तविक उमेरभन्दा धेरै बढी देखिन गएको हो ।’
अध्ययनको निष्कर्ष यो पनि छ कि बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चाका आमाले शिशुको स्याहारमा बढी समय बिताउनुुपर्ने हुनाले थकान पनि बढी हुन जान्छ । त्यसैले मौका पाउनेबित्तिक्कै सुतिहाल्नुपर्छ । यसले पनि थकान घटाउन धेरै मद्धत गर्छ । अर्काे कुरा, शिशुको स्याहारमा आफू मात्र होइन, परिवारका अरू सदस्यले पनि सघाउनुपर्छ । यसले सुत्केरी महिलामा बढी भार पर्न कम हुन्छ ।
अध्ययनका क्रममा सो टोलीले एक वर्षका बच्चाका ३३ आमामाथि सोधपुछ गरिएको थियो । जसअन्तर्गत बच्चा जन्मिएपछि कति निदाउनुभयो भनेर पनि सोधिएको थियो । तीमध्ये आधाले पर्याप्त सुत्न नपाएको जवाफ दिएका थिए ।
यस्तै, अनुसन्धानका लागि उनीहरूको रगतको नमुना पनि लिइएको थियो । जसबाट उनीहरूको उमेरमा तीव्र रूपमा वृद्धि भएको, अन्य रोगको संकेत पनि देखिएको थियो ।
अध्ययनको निष्कर्ष यो पनि छ कि, बच्चा जन्मिएको सुरुको ६ महिना निकै महŒवपूर्ण छ । यतिबेला निद्राको अभावमा रोगको खतरा पनि बढ्छ । त्यसपछिका महिनामा भने निद्राको अभावको खासै प्रभाव देखिएन ।
प्रदेश ३ एजेन्सी - August 8, 2020 0
शुद्धता, सद्भाव र आस्थाको महापर्व छठ आज श्रद्धा एवं हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ । आराध्यदेव सूर्यको आराधना गरी मनाइने यस पर्वको तेस्रो दिन बर्तालुले आज बेलुकी...
अन्तराष्ट्रिय एजेन्सी - February 12, 2020 0
Not-to-be-missed एजेन्सी - October 5, 2020 0
खेल एजेन्सी - January 22, 2021 0
प्रदेश ५ एजेन्सी - February 27, 2020 0
Breaking News एजेन्सी - January 12, 2021 0
विदेश एजेन्सी - May 21, 2021 0
गाजा सिटी । प्यालेस्टिनीको बसोबास रहेको गाजा पट्टीमा ११ दिनदेखि जारी आक्रामक कारबाही रोक्न इजरायल सरकार र गाजाको विद्रोही संगठन हमासबीच बिहीबार युद्धविराम भएको...
Exclusive एजेन्सी - January 1, 2021 0